Faah faahin laga bixiyay Xariga Xildhibaan Dhakool – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Faah faahin laga bixiyay Xariga Xildhibaan Dhakool
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliland ayaa faah faahin ka bixiyay sababta ka dambeysay in la xiro Xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka tirsan Golaha Wakiilada Soomaalilnad.
Taliye ku xigeenka Booliska Soomaaliland ayaa sheegay in Xildhibaan Dhakool uu sameeyay fal lidki ku ah Qaranimada Soomaaliland,isla markaana uu bilaabay Kicin Dadweyne,waxa uuna carabka ku dhuftay in wax walbo oo lid ku ah Qaranimada Soomaaliland ay ka hortagi doonaan sida uu hadalka u dhigay.
Taliye ku xigeenka Booliska Soomaaliland ayaa xusay in Xildhibaanka uu ka hor yimid go,aano Dadweynaha Soomaaliland ay gaareen oo ah Maalinta Gooni isutaaga Soomaaliland ee 18-ka bisha May, balse Xildhibaanka uu baraha bulshada ku faafiyay hadalo lid ku ah Maalintaasi.
Dhinaca kale Afhayeenka Ciidamada Booliska Soomaaliland Feysal Xiis oo hadlay ayaa sheegay in amarka lagu xiray Xildhibaan Dhakool uu bixiyay Taliyaha Booliska Soomaaliland,waxa uuna Afhayeenka hoosta ka xariiqay in wax walbo oo ka hor imaanaya jiritaanka Soomaaliland ay talaabo ka qaadi doonaan.
Sikastaba ha ahaate Amuurta xariga Xildhibaan Maxamed Dhakool ayaa ka dambeeyay kadib markii uu maalintii shalay si aad ah u dhaleceeyay Xuska 18- bisha may oo uu ku sheegay iney tahay maalin mid ka mid ah beelaha Soomaaliland wada daga ay gaar u lee yihiin.
Previous articleGaroonkii ugana weyn adduunka oo Shiinaha meel-geba gebo u maraya dhismihiisa (War-bixin faah-faahsan)
Next articleImisa Weji Ayuu Qofku Xasuusan Karaan Noloshiisa?
Dadka qaba xanuunka COVID19 OO kun kor u dhaafey Soomaaliya